Indlu yeZibuko iSapodilla Bay-Bona umahluko wethu - I-Airbnb
Indlu yeZibuko iSapodilla Bay-Bona umahluko wethu
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMichelle
Ukukhetha i-villa efanelekileyo yokuchitha ixesha lakho elixabisekileyo kunye nokwenza iinkumbulo kunye nabahlobo kunye nosapho kunokuba ngumsebenzi onzima. Ke sizame ukwenza kube lula, kwaye sidibanise izizathu zethu ezi-5 eziphezulu ekufuneka uzibhukishe kunye nathi kwaye ube namava omahluko we-Harbour House.
1. Isitayile saselwandle i-bungalow ye-2 yokulala enazo zonke izinto eziluncedo zekhaya kuphela imizuzu emi-2 ukuya eSapodilla Beach emangalisayo.
2. Iinkonzo ze-Stellar concierge
3. Zonke-In-One Amaxabiso - akukho ntlawulo zifihliweyo
4. Inkqubo yokunyaniseka kwiindwendwe
5. Abanini abakhathalayo
I-Harbour House yindlu ephakamileyo enesitayile solwandle eyenzelwe ukuthuthuzela kunye nokunxibelelana ngokulula phakathi kwemithi yesundu. Uya kufumana iindawo ezininzi zokusasaza kwi-Harbour House nokuba kuselanga kumgangatho ongaphambili, umthunzi kunye nempepho epholileyo kumgangatho ongasemva, phantsi kwechibi le-Gazebo okanye ukutshisa ilanga kwindawo yethu yokulala. Yonwabela i-16' x 24' ichibi lamanzi anetyuwa ashushu, i-gazebo kunye nendawo yepatio kwicala elinelanga le-Harbour House ukuthatha ithuba lelanga elimnandi lasemva kwemini. Yonwabela intsasa yokuqubha echibini ngaphambi kokuba uye elunxwemeni okanye uhlale apho imini yonke. Ipatio ijikelezwe kumhlaba ochumileyo ogcwele ibougainvillea kunye nemithi yesundu kunye nowethu umthi wekalika obonelela ngeCaribbean ambiance oyifunayo. Ebusuku qiniseka ukuba ulayita izibane zamachibi kwaye ujabulele umboniso wokukhanya!
I-Harbour House iye yaphuculwa kuyo yonke indawo kodwa igcina isiqithi esipholileyo sendlu yaselwandle. Iingcango zaseFransi ngaphambili nangasemva zivuleke ngokubanzi ukuvumela impepho, kwaye iidesika zibonelela ngeendawo zokuhlala ezingaphandle ezivulekileyo ngaphandle kwamagumbi okutyela, ajikelezwe yimithi kunye nohlaza lwemveli. Iingcango zangaphambili nezingasemva kunye neefestile zinealuminiyam evundiweyo evumela iifestile ukuba zihlale zivulekile imini okanye ubusuku ngokukhuselekileyo ngelixa impepho entle yokupholisa yorhwebo-yomoya idlula endlwini.
Ngaphakathi, ekhitshini kulapho uninzi loluntu lwenzeka khona kwaye lubonisa indawo entle yegranite bar, iikhabhathi zeSapelli Mahogany kunye nezibane ezilengayo ze-onyx zinika esi sithuba iklabhu yasebusuku epholileyo ivakale njengoko uhleli kwizitulo zebhari kwaye ukhumbula uhambo lwakho lwesiqithi ngorhatya ngalunye. Itafile yokutyela ihlala ngokukhululekileyo ukuya kubantu abasi-8 kwigumbi lokutyela okanye ungakhetha ukutya ngaphandle kumgangatho ongasemva phantsi komthi wesundu kunye nemithi yeMahoe edubulayo. Uya kudla ukwabelana ngesidlo sakho sakusasa kunye nomhlali waseBahama Woodstar Hummingbirds kusasa!
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu kwaye, ukuthuthuzela, ifenisha yesilingi kunye ne-air conditioning xa kuyimfuneko. Iifestile zangaphambili zikhutshiwe ezinokuthi zihlale zivulekile ubusuku bonke ukuvumela impepho ukuba ihambe kwigumbi lokulala. Igumbi lokuhlambela libonelela ngeesinki zakhe kunye nezakhe kunye nethayile yebhastile yetravertine ephangaleleyo kunye neshawari yeglasi.
Igumbi lokulala lesibini likwabonelela ngebhedi yobukhulu bokumkani, i-air conditioning, iifestile zesilingi ezivulwe yifeni, kunye ne-ensuite enebhafu / indibaniselwano yeshawari kunye namampunge.
Igumbi lokuhlala elivulekileyo lamkelekile ngeesilingi eziveziweyo ezenziwe ngomqadi, isilingi fan kunye nefenitshala etofotofo, yangoku-indawo emema bonke ukuba bahlanganisane. I-couch yecandelo inobukhulu bokumkanikazi obukhupha ibhedi ekhululekile kwaye yenziwe lula kunye nesiqingatha sokuhlambela kufuphi. Ukonwabisa ngaphakathi kukho i50”' HDTV, iDVD player kunye nebluetooth soundbar kunye neinternet engenazingcingo.
Zonke izinto eziluncedo zekhaya ziyafumaneka kwiHarbour House kubandakanya:
-Ikhitshi elinazo zonke izixhobo kunye nezixhobo oza kuzifuna ukuze ulungiselele ukutya ekhaya
- Iilinen zebhedi, iibhafu kunye neetawuli zaselwandle kuzo zonke iindwendwe
-I-cable TV, i-Android kunye nebhokisi ye-Apple TC (iyafumaneka ukuze isetyenziswe kunye negama lakho labucala njl.njl.), iiDVD, iiCD, imidlalo yosapho
- Isitulo esiphakamileyo, ibhedi, ipakethe kunye nokudlala, isilawuli seambrela, kunye nebhedi yabantwana
-Izitulo zaselwandle, iiambrela, iithoyi zesanti, iicoolers, iibhatyi zobomi (ubukhulu obahlukeneyo)
- Idama lidada
- Umhlambi nomomisi
-Isepha, iitawuli zephepha, impahla yokuhlamba kunye nesicoci sokuhlamba izitya, kunye neengxowa zokulahla inkunkuma
I-Harbour House ibekwe kwindawo ekhuselekileyo ye-Harbour Gates. Ukufikelela ngasese kwindawo entle yeSapodilla Beach kukuhamba ngemizuzu emi-2 kuphela ukusuka kwivilla.
Ulwandle lwaseSapodilla lunesanti ethambileyo engumgubo kunye namanzi ashushu angekho nzulu. Kuba ulwandle lukhuselekile, amanzi azolile, alungele abantwana okanye uphonononge ngeekayak okanye iibhodi zokubheqa. Lolona lwandle luhle kwesi siqithi.
Unokuhamba uye kwindawo yokutyela edumileyo yaseLas Brisas ngemizuzu emi-2 kuphela. ILas Brisas yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela isiselo sangaphambi kwesidlo sangokuhlwa okanye uphumle ngokuhlwa.
Zonke iilwandle ezintle kunye neendawo zokutyela zaseProvidenciales zifikeleleka ngokulula kwi-Harbour House kwaye zinokufikelelwa
Likhaya lethu eli. Sichithe iminyaka sizama ukufumana indawo efanelekileyo yokwakha iinkumbulo nabahlobo kunye nosapho. ke siyifumene - Harbour House, kwaye ngoku sifuna ukwabelana nawe - iindwendwe zethu. Sifuna ukuba ufumane ulonwabo olufanayo kunye nokuphumla ngexesha lokuhlala kwakho, njengoko sisenza ngexesha lethu. Kwi-Harbour House, uya kuba nonxibelelwano oluthe ngqo nathi ukusuka kumzuzu wombuzo wakho wokuqala, ukuya kumhla wokuhamba kwakho, nangaphaya.
Likhaya lethu eli. Sichithe iminyaka sizama ukufumana indawo efanelekileyo yokwakha iinkumbulo nabahlobo kunye nosapho. ke siyifumene - Harbour House, kwaye ngoku sifuna ukwabelana…